Isitudiyo, ifama yeNdlu ePhezulu, eCrickhowell. - I-Airbnb
Isitudiyo, ifama yeNdlu ePhezulu, eCrickhowell.
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguKeith
Isitudiyo yindawo ezolileyo nepholileyo evalelweyo enegaraji ephindwe kabini kuphuhliso olukhethekileyo-imizuzu nje embalwa uhamba ukusuka kumbindi weCrickhowell kunye neendawo zayo zokutyela, iiresityu, iikhefi, indawo yokutyela, iofisi yabakhenkethi kunye neevenkile ezininzi ezinomdla. Kukho iimbono ezintle ukusuka kwigumbi lokuphumla. Isitudiyo sisanda kuvulwa ngo-2017 ngokuhombisa okutsha, ikhitshi, izinto ezilungisiweyo, izixhobo kunye neekhaphethi. Kwaye yonke into ihlaziywa rhoqo ukugcina izinto zintsha. Igumbi lokulala le-mezzanine linebhedi ekhululekileyo yaseKumkani.
Isixhobo sokufudumeza igesi esipheleleyo/amanzi ashushu kunye neendonga ezifakelweyo kunye neloft zenza iStudiyo ibe yindawo etofotofo nyhani. Buyela emva kosuku kwi-Brecon Beacons ukuya kwigumbi lokuphumla elixhotyiswe kakuhle eliquka: 43 Inch 4K Smart TV kunye ne-HDFR Freeview/ Play kwaye ukuba unesubsription Netflix njl njl. Umatshini wokudlala umculo weBluetooth/ iWiFi/iDVD Player/iDAB Redio enendawo yesipikha seBluetooth/Isignali Yefowuni. Iincwadi, imidlalo, iimagazini, iiseti zebhokisi ze-DVD kunye neemuvi ziyafumaneka. I-Nest Home Mini ikhona ukuze iphendule imibuzo malunga nendawo.
Ikhitshi lixhotyiswe ngeoveni yombane, i-microwave, ifriji, iketile kunye ne-toaster. Kufumaneka iindawo zokwenza iti nekofu, kunye nePhakheji Yokwamkela enesonka, imijelo, iiWelsh Cakes, ubisi, ijusi eorenji, iibhiskithi zeetshokolethi (kunye nebhotile entle yewayini xa kuza kuhlalwa iintsuku eziyi-7 nangaphezulu).
Igumbi lokulala linebhedi enkulu, i-Smart TV, ibhegi enkulu yeedrowa kunye nendawo yokuxhoma iimpahla eneehengari.
Igaraji elala abantu ababini inendawo yokupaka ekhuselekileyo yemoto, izithuthuthu, iibhayisekile zasezintabeni, ii-kayaks kunye neenqanawa. Ikwayifriji, umatshini wokuhlamba nowokomisa impahla onesepha yokuhlamba impahla ne-conditioner. Kukho nomgca wokuhlamba 'onokuphinda usetyenziswe'.
Ngelishwa ngenxa yoyilo lwayo, kunye nezitepsi ezijikelezayo kunye negumbi lokulala eliyi-mezzanine elineefestile eziphantsi, le ndlu ayibalungelanga abantu abakhubazekileyo okanye abantwana abangaphantsi kweminyaka eyi-10 .
Uxolo akukho zilwanyana zivumelekileyo. Isitudiyo yindlu engatshayiyo ibe ababuki zindwendwe bangakuvuyela ukuba iindwendwe zikhuphe izihlangu neebhutsi 'phandle' emnyango.
UKeith uza kukuthumelela umyalezo ngosuku lokufika kwakho ukuba kunokwenzeka ungene ngaphambi ko-4pm.
4.98 · Izimvo eziyi-133
ICrickhowell yindawo ethandwayo ngabakhenkethi eMid Wales. Uninzi lwabantu lutyelela ukubona iiBlack Mountains kunye neeBrecon Beacons, kwaye mhlawumbi bonwabele ukuhamba ngebhayisekile entabeni, ukukhempisha, ukuhamba ngeenduli, ukunyuka iliwa, ukuloba ngenqwelo-moya, ukuhamba ngephenyane, ukuhamba ngephenyane okanye ukuyobona nje indawo ngemoto. I-BikePark Wales, ekumgama weemayile eziyi-30/iimayile eziyi-10, yipaki yokuqala epheleleyo yebhayisekile yaseUK embindini weentlambo zaseSouth Wales, eyakhiwe ngabakhweli.
Umsitho wokuhamba weCrickhowell nge-4 kaMatshi ukuya nge-12 kaMatshi 2023.
I-Talgarth Walk Festival 2023 Iintsuku
ze-TBC Umnyhadala weHay Literary 26 ukuya kuJuni 5, 2022. (Hay on Wye ikumgama wemizuzu eyi-30 ngemoto kodwa izindlu ezisemaphandleni zibiza kakhulu eCrickhowell).
Umsitho weBrecon Jazz: nge-12 ukuya nge-14 ka-Agasti 2022.
Umsitho weGreen Man ukususela nge-18 ukuya nge-21 ka-Agasti 2022 kwi-Glanusk Park ekufutshane.
Umsitho Wokutya waseAbergavenny ukususela nge-17 ukuya nge-18 kaSeptemba 2022.
(Kubalulekile! jonga zonke iintsuku ezingasentla kwiiwebhusayithi zomququzeleli ukuze uqinisekise iintsuku ezichanileyo ngaphambi kokubhukisha Isitudiyo).
I-Gower Peninsular entle okanye i-Elan Valley Dams ikulungele uhambo losuku.
ICrickhowell ineebhari, iikhefi neevenkile zokutyela eziliqela, ezifana ne- "The Bear Hotel" kunye ne- "The Dragon".
I-Crickhowell High Street yathwetshulwa kwezona zigqwesileyo e-UK kwi-Great British High Street Rewards ngoNovemba 2018. Kukho iivenkile ezintle eziqhutywa yintsapho (akukho maqhekeza enkampani apha!)
Iidolophu zaseAbergavenny, eBrecon, eHay on Wye nazo ziyakufanelekela ukutyelela kwaye zineevenkile ezinkulu ezikufutshane nawe. Ukuthenga kakhulu kungenziwa eCardiff, eMerthyr Tydfil 's Trago Mills naseCyfarthfa Sales Parks.
Umbuki zindwendwe ngu- Keith
We are a well travelled family having lived in Hong Kong and Germany. We have also holidayed in many many locations around the world, Europe, USA, India etc. Keith and Lynne jointly own The Studio in Crickhowell, Wales with their son Jamie. We know what its like to be disappointed by a cottage or hotel booking that falls below expectations. That's why we want your holiday to be memorable for all the right reasons!
We are a well travelled family having lived in Hong Kong and Germany. We have also holidayed in many many locations around the world, Europe, USA, India etc. Keith and Lynne jointl…
Uya kuba neStudio ngexesha lokuhlala kwakho. Sinokufumaneka ngefowuni, ngetekisi okanye nge-imeyile ngamaxesha amaninzi ngayo nayiphi na imibuzo, imibuzo, iingcebiso okanye xa kunokwenzeka ukuba kubekho iingxaki. Enye yentsapho yethu iya kuba kufutshane, ukuba ufuna ukuba sincede ngento ubuso nobuso. Ukufikelela ngokhuseleko oluphambili - ikhowudi enikezelweyo ngaphambi kokufika.
Uya kuba neStudio ngexesha lokuhlala kwakho. Sinokufumaneka ngefowuni, ngetekisi okanye nge-imeyile ngamaxesha amaninzi ngayo nayiphi na imibuzo, imibuzo, iingcebiso okanye xa kuno…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Crickhowell